Ku riyooda riyooyin indhahaaga xidhma, laakiin riyadaada ku noolow indhahaaga indhaha furan. - qarsoodi - Quotes Pedia
Ku riyooda riyooyin indhahaaga xidhma, laakiin riyadaada ku noolow indhahaaga indhaha furan. - Qarsoodi
Riyoodku waa mid ka mid ah qaybaha lagama maarmaanka u ah nolosheena. Haddii qof aanu ku riyoon, qofkaasi noloshiisa hami yar buu ku leeyahay. Sidaa darteed, haysashada qaar Riyooyinka noloshaada aad ayey muhiim u tahay.
Kaliya kaa caawin maayo inaad ku guuleysato nolosha, laakiin waxay sidoo kale kaa dhigeysaa qof jecel. Xaaladda haddii aadan ku riyoon noloshaada gaar ah, waxaa jira fursado aad u yar oo aad ku guuleysan karto guusha.
Ka sokow, riyada waa wax xoojin doona dabeecadaada. Sidaa daraadeed, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto maaha inaad joojiso riyada. Markaad joojiso riyada, maalintaasi waxay noqon doontaa maalinta ugu dambeysa ee noloshaada.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad hubisaa in riyada oo keliya aysan wax kuu tari doonin. Waa inaad hubisaa inaad bixineyso dadaalkii loo baahnaa si aad u gaarto yoolalkaaga.
Waxaad ubaahantahay inaad qorsheysato qorshe sax ah oo kaa caawin doona inaad gaarto halkaad u socotid. Waa inaad si adag u shaqeysaa, haddii kale noloshaada waad ku guul darreysaa.
Waxaad ogaan doontaa in ay jiraan dad fara badan oo kaliya oo riyooda wax weyn oo hadal weyn leh. Laakiin haddii aad rabto inaad u rogto riyadaada mid dhab ah, waa inaad ku shaqaysaa. Waa inaad isu diyaarisaa si aad u gaarto yoolkaaga iyada oo aan wax arrimo ah laga hadlayo.
Ka sokow riyadaas ayaa noloshaada wax badan u tari doonta. Tusaale ahaan, waxaad noqon doontaa qof aad u sii hibeeya himiladaada. Iyo, inta aad ka gaadhayso riyadaada, dabeecaddaada ayaa marqaati u ah horumar. Si aad u noqoto mid sax ah, koritaanka dabeecadda ayaa kugu dhici doona.
Sidaa darteed, waligaa ha joojin riyada ku saabsan waxa aad noloshaada ku rabto. Maalin maalmaha ka mid ah waxaad ogaan doontaa inaad gaadhay himiladaadii aad doonaysay. Oo maalintaas waxay noqon doontaa maalin ay riyadaada ku tixgelin doontaa mid ka mid ah Rabbiga waxyaabaha ugu muhiimsan noloshaada.
Raadinta xigashooyinka riyada
Xigashooyinka Guusha Riyada
Quotes Big Big
Xigashooyinka riyada mustaqbalka
Xigashooyinka xigasho ee riyooyinka
Fur Indhahaada Indhahaaga
Raacso xigashada riyadaada
Xigashooyinka ku saabsan Guul Riyada
Xigashooyinka ku saabsan Riyooyinka iyo Yoolalka
Xigashooyinka ku saabsan Yoolalka iyo Riyada
Xigashooyinka riyada gaaban
Xigasho nololeed xigmad
Noloshu waa sidii buug oo kale. Haddii aadan waligaa soo rogin bogga, ma ogaan doontid waxa ku xusan cutubka xiga. - Qarsoodi
Xusuusnow in noloshu dhab ahaantii la mid tahay buug leh tiro bogag aan la tirin karin. Bogagaan waxay si dhab ah u muujinayaan…
Waligaa ha ka jawaabin markii aad xanaaqdo. Weligaa ha ballan qaadin markii aad faraxsan tahay. Waligaa go'aan ha gaadhin markaad murugeysan tahay. - Qarsoodi
Waxaa la sheegay in waqtiga iyo go'aanku yihiin labada arrimood ee ugu muhiimsan nolosha waana in…
Ha sugin in waxyaabaha ku fiicnaadaan. Noloshu had iyo jeer way dhib badnaan doontaa. Baro inaad ku faraxdo hadda, haddii kale waqti baa kaaga dhaca. - Qarsoodi
Waa inaadan waligaa sugin inta waxyaabo ka fiicnaanayaan. Ogow in noloshu had iyo jeer adagtahay, oo ma ...